Nheyo PSG - PSG: Dukuro rinoreva Paris sarudzo yakanakisisa yeB in the mercato - FOOT 01 - TELES RELAY
HOME » SPORTS »Paka PSG - PSG: Doro rinotarisa kuParis semurongwa wakanaka kwazvo B mu mercot - FOOT 01
Yakagadzirwa neParis Saint-Germain iyi yechando, Abdoulaye Doucouré (26 years) akanga asarudzwa naWatford.
Mwedzi mishomanana gare gare, mutendi wacho haana kuchinja pfungwa dzake. Uyu aimbova mutambi weStene Rennais achiri kutarisira kubatana nechikoro chinokurudzira chinomubvumira kuti atambe muChampions League. Asi kana ichienderana nehuwandu hwehuwandu, chikwata cheguta guru hachisi chekutanga cheFrench, asi pane kutarisira kwechirevo cheChirungu cador.
« Handizorota pane rimwe boka. Zvechokwadi iyo PSG ndeimwe yepamusoro muEurope, asi ini handina kufunga mupfungwa yekuda kuenda ku PSG pane zvose, Doucouré akaudza British press. Ndinoda kugara muLigian Premier League, ndinofunga kuti ndiyo mutsara wakanaka kukuratidza maitiro angu. Mushure mezvo zvinoenderana nezvinoitwa, zvinoenderana nezvinhu zvakawanda. »
Doucouré anoda kusiya asi ...
« Ini ndakasununguka zvikuru. Kana chimwe chinhu chichiitika, zvakanyanya zviri nani, zvisinei ini ndichafara neJersey's Watford. Ndakapa zvinhu zvose kwemakore matatu, uye kana ndikagara imwe imwe nguva, ndichafara. Kana ndikabva, ini ndichafara zvakare. Munhu wose anoziva zvandinoda, asi hazviiti kuti zviitike sezvatinoda "Akadaro Doucouré, achichenjerera kusavhara suo chero ripi neripi remangwana rake.